Faratsiho : Notohizana ny fanamboarana ny RN43 -
AccueilRaharaham-pirenenaFaratsiho : Notohizana ny fanamboarana ny RN43
Tonga nametraka ny vato fototry ny fanombohana ny asa fanamboarana ny Lalam-pirenena faha-43 (RN43) tao amin’ny distrikan’i Faratsiho ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly.
Tamin’izany indrindra no nanambarany tamin’ny lahateny nataony nanoloana ireo olona marobe nanotrona ny lanonana, fa amin’ny alalan’ny asa ihany no hanamarinana ny fitiavan-tanindrazana. Ny fanarenana ny firenena, hoy izy, tsy ho vita ao anatin’ny iray andro fa mila fotoana izany. Nambarany fa efa maro tsy tambo isaina ny zava-bita, ary mbola mitohy hatrany kosa ny asa fampandrosoana ataon’ny Fitondram-panjakana izay tarihiny. “Tsy maintsy miasa isika, ary miasa miaraka sy mifanome tanana mba hialàna amin’ny fahatrana. Lavaka mangitsokitsoka no nototofana. Tsy manototra ihany anefa fa manangana ho an’ny taranaka ihany koa”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Miantso ny fanovana toe-tsaina ihany koa ny Filohan’ny Repoblika mba hanatrarana ny toe-tsain’ny “Fisandratana”. Mila mijery lavitra isika, hoy izy, raha te hampandroso marina ny firenena.
Ankoatra izay, nanao antso avo ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny hanoherana ny herisetra. “Mandala ny fihavanana isika, noho izany mila arovana ny fihavanana. Toraka izany koa ny fiarovana ny zava-bita”, hoy hatrany izy.
Manoloana ny toe-draharaha sy ny fanakorontanana amin’izao fotoana izao, miantso ny vahoaka ho tony koa ny Filoham-pirenena. “Tsy ny Filohan’ny Repoblika mihitsy no hiady amin’ireo mpanakorontana. Tsy ao anatin’ny herisetra sy fifandrafiana no hampandrosoana ny firenena. Ny fifidianana ihany no hitsarana ny mppitondra”, hoy ny Filoham-pirenena.
Mahakasika ny fanamboarana ny ampahan-dalana amin’ny RN43 mampitohy ny distrikan’i Faratsiho amin’ny kaominina Sambaina sy ny lalana Ambohibary – Ampetsapetsa, napetraky Filoham-pirenena tamin’ny fomba ôfisialy, omaly, tao Faratsiho, ny vato fototra amin’ny fanombohan’ny asa.
Nambaran’ny minisitry ny Asa Vaventy (MTP), Eric Razafimandimby, fa mitentina 25 tapitrisa Dolara ny fanamboarana ireo ampahan-dalana ireo, izay mirefy 55 km eo ho eo. Ny 90%-n’ny tetibola-panamboarana kosa avy amin’ny BADEA sy ny Fonds Saoudiens de Développement (FSD), ary ny 10% avy amin’ny Fanjakana malagasy. Ny orinasa Smatp sy ny CRBC kosa no miantoka ny fanamboarana. Marihina mantsy fa mirefy 131 km ny RN43 miala avy eto Antananarivo, ka ny ampahany izay mbola tsy nisy nikitika hatramin’izay ary tena mampikaikaika ny mponina manomboka eo Faratsiho mihazo an’i Sambaina no amboarina. Haharitra 18 volana kosa ny faharetan’ny fanamboarana. “Ny lalana no mitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena, ary izay ihany koa no ahafahan’ny olona sy ny vokatra mifamezivezy. Mampiroborobo ny fizahantany ihany koa izany”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.